ब्यूनस आयर्समा चार संग्रहालय | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | ब्यूनस आयर्स, के हेर्ने
यो शहरलाई चिनिन्छ चाँदीको रानी y यो दक्षिण अमेरिकामा महान जीवन र सांस्कृतिक समृद्धि संग एक शहर हो। परिवर्तनलाई धन्यवाद जुन पर्यटकहरूका लागि लाभदायक छ जो यूरो वा डलर लिएर आउँदछन्, केहि समयको लागि यो अंश एक उत्तम पर्यटन गन्तव्य बनेको छ त्यसैले हामी पत्ता लगाउन सुरु गर्न सक्छौं। यसको केहि उत्तम संग्रहालयहरू र आकर्षणहरू।
El कोलन थिएटर, the इविटा संग्रहालय, the आप्रवासन संग्रहालय र बार्लो प्यालेस तिनीहरू आज हाम्रो चुनिएका व्यक्ति हुन्। शहर को प्रतीक, तर पनि दक्षिण अमेरिका मा यो धेरै विशेष राष्ट्र को इतिहास।
1 ब्यूनस आयर्स
2 कोलन थिएटर
3 इविटा संग्रहालय
4 आप्रवासन संग्रहालय
5 बार्लो प्यालेस
ब्यूनस आयर्समा औपनिवेशिक समयमा महत्त्वपूर्ण महानगर भएको छैन भन्ने विचित्रता छ। दक्षिणमा पनि लिमा स्पेनका लागि रियो दि ला प्लाटाको किनारमा रहेको टाढाको र गरीब शहर भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण थियो।
यी भूमिहरू १ 1816१ in मा स्पेनबाट स्वतन्त्र भए, छ बर्ष विद्रोह र क्रान्तिहरु पछि, सम्पूर्ण उन्नीसवीं शताब्दी मोर्चा को एक शताब्दी थियो र गठन गर्न को लागि राष्ट्र को मोडेल वरिपरि मोड। १ th र २० औं शताब्दीको बीचमा कृषि उत्पादनको शिखर थियो र यसरी धेरै धनी अभिजात वर्गको जन्म भयो, जसका मानिसहरू भनिन्छ "छानामा फ्याँकिए।"
त्यहाँ एलिटहरू छन् जसले आफ्नो देशको विकासमा लगानी गर्छन्, संयुक्त राज्य अमेरिका एक केस हो, र अरूले पनि गर्दैनन्, अर्जेन्टिनाको त्यस्तो मामला। उद्योगको विकासमा लगानी नगरी, दुःखको कुरा आज पनि उनी केवल यस क्षेत्रले विदेशमा बेच्नको लागि मात्र चिन्तित छन्। सत्य यो हो कि यसको २०० बर्षको स्वतन्त्रताले हामीलाई यी प्रतीकात्मक ठाउँहरू छोडिदियो जुन हामी तल जान्ने छौं।
२०० 2008 मा यसले आफ्नो पहिलो सय वर्ष अस्तित्वमा मनायो। यसको उद्घाटन मे २,, १ 25 ०1908 मा भएको थियो ओपेरा एडाको साथ र कार्यहरूले करीव बीस बर्ष लिए। यसका तीन वास्तुकारहरू थिए र अन्तिम, बेल्जियम जुल्स डोरमल, जो फ्रेन्च शैली प्रिन्ट गरे जुन आज सजावटमा देखिन्छ। पछि यो एक्लेक्टिक भवन हो धेरै सबसोइलहरू र विस्तारहरूको साथ जुन 60० को दशकमा थपिएको थियो। आज यो लगभग thousand thousand हजार वर्ग मिटर ओगट्छ।
मुख्य कोठा घोडाको जुत्ताको आकारमा सुन्दरता हो: त्यहाँ तेस्रो तलामा बक्सहरू छन् पहिले नै २2478। सिटहरू Standing०० स्थायी व्यक्ति थपियो। सुन्दर गुम्बज measures१500 वर्ग मिटर मापन गर्छ र चित्रले सजाइएको छ (मूल रूपमा ती मार्सेल जाम्बनद्वारा थिए तर १ 318 s० को दशकमा बिग्रिएपछि उनीहरू कलाकार राल सोल्दीले प्रतिस्थापित गरे)।
¿त्यहाँ पर्यटक भ्रमणहरू छन् जसले तपाईंलाई तपाईंको भित्री आश्चर्यको कदर गर्न अनुमति दिन्छ? अवश्य। भ्रमणहरू तिनीहरू holidays 34 जना भन्दा बढि व्यक्तिको समूहमा हुन्छन्, प्रत्येक दिन बिदा बाहेक बिहान holidays देखि साँझ। सम्म। प्रस्थानहरू प्रत्येक १ minutes मिनेट, अन्तिम minutes० मिनेट हुन्छन् र विदेशीहरूको लागि $ २$० र निवासीहरूको लागि A। ० को मूल्य हुन्छ। केहि १eयूरो यदि तपाईं विदेशी हुनुहुन्छo.
यदि तपाइँ एक शो को अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ, १ A० A $,eयूरोबाट गणना गर्नुहोस्।
यस संग्रहालयको फाइदा शहरको मध्य भागमा भएको भएको छ, बारियो नोर्टे। सायद यो एउटा त्यस्तो ठाउँ छैन जहाँ पर्यटकहरू प्रायः पैदल यात्रा गर्छन्, जो सामान्यतया सान टेल्मो वा कोरिएन्ट्स स्ट्रीट हुँदै जान्छन्, तर संग्रहालय यो सब भन्दा रमणीय छिमेक मध्ये एक हो र अहिले सम्म केहि छैन। वास्तवमा, यो प्रख्यात प्लाजा डे मेयोमा लाइन डी मेट्रो लिन र केही स्टेशनहरू पछि प्लाजा इटाल्या स्टेशनमा जानको लागि पर्याप्त छ, केहि ब्लकहरू टाढा हुनका लागि। तीनिहरु तपाई लाई असंख्य बसहरु वा colectivos.
यो एक ठूलो घर मा काम गर्दछ त्यो ब्युनोस आयर्स परिवारको हो। यो २० औं शताब्दीको निर्माण हो इटालियन र स्पेनिश नव-पुनर्जागरण शैलीजुन १ 1948 XNUMX मा इवा पेरन फाउन्डेशनले किनेको हो, जुन फाउन्डेशन राष्ट्रपति त्वरित डोआमिंगो पेरेनको तत्कालीन श्रीमतीले चलाए। यो ट्रान्जिट होम थियो जसमा एकल महिला वा बच्चाहरूसहित सबै देशभरिबाट आएका थिए काम, स्वास्थ्य वा आवास समस्याहरूको उपचार र समाधान गर्न।
संग्रहालय मा स्थित छ Lafinur सडक २ 298।8, Avenida लास हेरास बाट कदम र उही नामको सुन्दर पार्क। यो लोकप्रिय शपिंग एवेन्यू, एभनिडा सान्ता फेको नजिक पनि छ। मंगलबार देखि आइतबार बिहान ११ बजे देखि 11 बेलुका सम्म खुला र सोमबार बन्द भयो। मार्गनिर्देशित भ्रमणहरू मारिया ईवा डुआर्ट डे पेरेनको जीवन र कार्यमा केन्द्रित छन्, सँधै यसको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा।
प्रदर्शनमा संग्रह सम्पूर्ण रूपमा देखिएको छ र एक्लोसनमा होइन। त्यहाँ छन् कागजातहरू र अडियोभिजुअल निर्माणहरू र ईविटाको व्यक्तिगत सामान। भ्रमणहरू मंगलबारदेखि आइतवारको हो स्पेनिश, पोर्तुगाली र अंग्रेजीमा र तिनीहरू लगभग minutes 45 मिनेट को लागी। कम्तिमा समूह पाँच व्यक्तिको मिलेर बनेको हुनुपर्छ। सबै कोठामा सामिल छन् ब्रेल प्रणालीअरे त्यहाँ दोभाषे छन् साङ्केतिक भाषा। साइन अप गर्न तपाईले वेबसाइट भ्रमण गर्नु पर्नेछ र फारम भर्नुहोस्।
संग्रहालय एक छ स्मारिका स्टोर पोस्टकार्डको साथ, टी-शर्ट, पिन, चाकू, किताब, म्याते बल्ब, कप, अर्जेन्टिना कक्याडहरू, पेन्सिल, कुञ्जी रिंग र गहना को पुन: उत्पादन जुन पहिलो अर्जेन्टिनी महिलाले एक पटक लगाएकी थिइन। त्यहाँ पनि छ रेस्टुरेन्ट बार स्थानीय भाँडा, एउटा खाजा र एक आकर्षक आँगनको सेवा दिँदै जहाँ तपाईं नास्ता, खाजा वा चिया खान सक्नुहुन्छ।
अर्जेन्टिना सब भन्दा उच्च अध्यागमन सहित एक देश हो महाद्वीप मा प्राप्त भएको छर। १ th औं २० औं शताब्दीको बीचमा लाखौं मानिसहरू पूरै यूरोपबाट आएका थिए र उनीहरूमध्ये कोही गरीबीबाट र कोहीले युद्ध वा धार्मिक सतावटबाट उम्केका थिए। देशको उत्तरमा कडा आदिवासी जनसंख्या, मूल मानिसहरुको वंशज, र आप्रवासीहरुको जनसंख्या छ जो आर्द्र पाम्पा र दक्षिणमा केन्द्रित छ।
यस अध्यागमनको इतिहासमा देख्न सकिन्छ पुरानो आप्रवासी होटलमा काम गर्ने अध्यागमन संग्रहालयs, यो कम्प्लेक्स जसले देशमा आएका लाखौं मानिसहरूलाई पहिलो आश्रय दियो। त्यस समयमा, डु boats्गाबाट तल झरेका मानिसहरूलाई स्वागत गरियो, तिनीहरूलाई आश्रय दिइयो, तिनीहरूको स्वास्थ्य नियन्त्रण गरिएको थियो, र आवास र रोजगारीको समन्वय गरिएको थियो। यी ठीक आजका संग्रहालयको अनुभवको अक्षहरू हुन्।
यस ठाउँको ढोका २०१ 2013 मा खोलियो, नवनिर्माण र पुरानो भवनको तेस्रो तल्लामा काम गरेको जहाँ बेडरूमहरू हुन्थ्यो। त्यहाँ आएका आप्रवासीहरूका फोटोग्राफहरू, कागजातहरू, रजिस्ट्री पुस्तकहरू, चलचित्रहरू, समकालीन साक्षीहरू, अवशेषहरू र हजारौं फोटोग्राफहरू छन्।। यात्रा कला प्रदर्शनीहरु जोडिएको छ।
संग्रहालय मंगलबार देखि आइतबार बिहान ११ बजे देखि 11 बेलुकासम्म खुला रहन्छ। सोमबारमा बन्द हुन्छ, छुट्टीहरूमा उस्तै।
यो सुरुचिपूर्ण दरबार भवन यो एक सुन्दर पुरानो एवेन्यू, Avenida de Mayo मा अवस्थित छ। कामहरू १ 1919 १ in मा शुरू भयो र त्यसबेला ल्याटिन अमेरिकाको सब भन्दा अग्लो भवन भएको थियो र संसारको सब भन्दा लामो प्रबलित क concrete्क्रीट मध्ये एक हो।
यसलाई बारोलो भनिन्छ किनभने कसले आदेश दियो यसको निर्माणकर्ता लुइस बार्लो थिए, एक करोडपति कृषि उत्पादक जो १ 1890। ० मा यस देशमा आएका थिए। उनले भवन किन्नका लागि मात्र बनाए र यो सोचे कि युरोप एक दिन यति धेरै युद्धहरूमा हराउनेछ। उसलाई डन्टे एलिघेरी यस्तै लाग्यो देवी कॉमेडी बाट प्रेरित हुन निर्णय गरे उनको डेब्यूको निर्माणमा।
परिणाम यो रमणीय थियो २ flo फ्लोरहरू, २२ तला र दुई तहखानेहरू सहितको भवन, को एक सय मिटर अग्लो। यसको गुम्बजको अन्त्यसम्म यो 90 ० मिटर मापन गर्दछ तर १०० मा उसको लाइटहाउस स्थापना भएको छ thousand०० हजार स्पार्क प्लगहरूसँग घुमाउँदै जुन यो समयमा उरुग्वेबाट देखिन्छ। योसँग अहिलेसम्म आफ्नै पावर प्लान्ट छ, नौ लिफ्ट, दुई लुकाइएका, र दुई फोर्कलिफ्टहरू छन्। लुकेका एलिभेटरहरू बरोलो आफैले उनका भाडामा लिने व्यक्तिहरूदेखि टाढा रहन प्रयोग गरे।
बार्लो प्यालेस गथिक भवन हो, यो रोमान्टिक गथिक हो, यो के हो? सिद्धान्तमा यो देवी कॉमेडलाई श्रद्धांजलि होia नरक संग, Purgtory र स्वर्ग किनभने काम को सन्दर्भ मा पूर्ण छ, यसको वाल्टबाट, यसको बोटको आकार मार्फत, ताराहरूको साथ यसको अभिमुखीकरण, ल्याटिन भाषामा यसका शिलालेखहरू, ड्र्यागनहरू र बत्तीहरूको कन्डरहरू।
गाईडेड टुरहरू सम्भव छन् पलासिओ बार्लो टुर प्रोजेक्टको लागि धन्यवाद: दरबार भित्र राती राती ट t्गो टान्सो नाच सिक्न को लागी र फोटोग्राफिक। ट्याang्गो वर्गहरू प्रति व्यक्ति A०० ए $ (१eयूरो) लागत, तर २300० यदि भवनको निर्देशित भ्रमण गरियो भने।
रातको भ्रमणहरू दिनको दृश्यहरू भन्दा विस्तृत हुन्छन् र तपाईं प्रकाश शहरमा रातको समयमा सोच्नको लागि जानुहुन्छ, एक गिलास दाखमद्य पिउनुहुन्छ र स्थानीय पकवानहरू स्वाद लिनुहुन्छ। यो लगभग दुई घण्टा लामो हुन्छ र स्प्यानिश र अंग्रेजीमा छ। तिनीहरू पनि प्रति व्यक्ति 300 A cost लागत। यी कुनै पनि गाईड टूर्सका लागि तपाईले पलासिओ बारोलो टुरमा बुक गर्नु पर्छ।
ब्युनोस आयर्समा चार अद्वितीय आकर्षणहरू जसले यस अमेरिकी राजधानीलाई निश्चित रूपमा संसारमा यस कलाको सबै भन्दा राम्रो गन्तव्यहरू बनाउँदछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » ब्यूनस आयर्स » ब्यूनस आयर्समा चार संग्रहालय
Of रोम शहरमा अज्ञात भ्रमणहरू